Zava-misy momba ny Halloween. Halloween na inona na inona mihoatra noho ny taloha fanaon'ny mpanompo sampy mba tsy ho manao, kely indrindra amin'ny Kristianina rehetra. Fahafatesana sy ny loza no omem-boninahitra.
Ao amin'ny 1840s, indrindra indrindra irlandey nitondra niaraka taminy io fankalazana selta, rehefa nifindra monina tany Amerika. Any Amerika, dia lasa be andro firavoravoana, na dia Kristianina ary no ankalazaina ny 31 Oktobra. Avy any Amerika, dia manana "Americanized" nandritra ny taona maro, dia niverina ho any Eoropa amin'ny lavaka "karandoha" ny voatavo, mpamosavy-napetraka, mampihoro-koditra saron-tava, scythes, devoly fitrebika sy tombstones amin'ny plastika na hazo.
"Koa izany no izy ireo mamono, renibe, ray, iray tam-po, namana dia mitovy raha niverina tamin'ny maty toy ny matoatoa, ny taolany sy ny demonia!"
Halloween dia mpanompo sampy talohan'ny andro kristianina tranga izay niandohan'ny indrindra amin'ny olona ekipa Selta. Ireo no avy any Azia Minora, na dia avy any Galatia (Torkia ankehitriny).
Ny Selta eoropeanina no voalaza ao amin'ny tantara, ny fotoana voalohany manodidina ny 500 talohan'i JK, rehefa taorian'ny fifindra-monina dia nipetraka tany amin'ny faritra avaratr'i Eoropa, ny faritra manodidina ny Danube sy ny faritra andrefan'i Alemaina. Tany Eoropa izy, dia nandeha ny anarana "gaeler" na "Grid".
Nandritra ny fotoana mahery setra fanitarana ny Selta nitatra ny faritra, andrefana mankany Belzika, ary indrindra ho any Grande-Bretagne, indrindra fa Irlandy, atsimon'i Italia sy Espaina ary miantsinanana ho any Azia Minora, izay indray nanorim-ponenana tany Galatia.
"Galates" koa ny teny grika anarany ny Selta. Tonga tsikelikely Ekosy, Pays de Galles ary Irlandy indrindra indrindra, mba ho heverina ho an-tokantrano ny Selta. Celtic fety ara-pivavahana, ary ny fiainana amin'ny ankapobeny, dia nitarika tamin'ny alalan'ny asan'ny maizina sy ny fampiasana ny hery, dia ny druids (mpisorona-Mpanjaka). Fombafomba sorona ny zavamaniry, matetika Mistletoe sy sakafo masaka, tamim-pifaliana mofo, dia singa mahazatra, fa sorona olombelona koa ny nitranga (jereo ny Lindow Man any Manchester, izay taolana hita tamin'ny 1984).
Ny fiainana sy ny fahafatesana andriamanitra Samhain
Stonehenge ao Angletera heverina eo maoderina mpikatsaka amin'ny "keltism", mba ho tena mahomby hetra ny herin'ny maizina. Izany no toerana ny andro maoderina mpamosavy sy Matoky an'ireo mpanasitrana ny miresaka amin'ny maty sy ny fombafomba fankalazana. Ny Selta nankalaza ny fetin'ny fijinjana sy ny Taom-baovao tamin'ny 1 Novambra. Tena mpanompo sampy andro masina. Ny antoko no nanamarika ny fiafaran'ny fahavaratra, ka ny fahafatesana sy ny maizina fararano fidirana eo amin'ny natiora, izay midika mihitsy ny fiandohan'ny fiainana vaovao. Ao amin'ny tany, ao amin'ny lavo ravina, nitsimoka takamoa madio.
Amin'izao fotoana izao ny taona midika koa, fa ny efitra lamba misy eo amin'ny velona ny olona eto amin'izao tontolo izao sy ny maty izao tontolo izao (eo incarnations) dia thinnest. Ny hariva talohan'ny Taom-baovao, io "masina hariva", ny "Hamasino Eva", izany hoe Oktobra 31, rehefa nanana ny hevitra fa ny maty, fara fahakeliny, ireo izay maty nandritra ny taon-dasa, ary ny hafa, na ny tsara sy ny ratsy hery sy ny fanahy - niverina tany eto an-tany eo ambany fitantanana ny fiainana sy ny fahafatesana andriamanitra (mazava sy ny maizina) Samhain. Ary nanjaka tany amin'ny tontolo izao voarindra sy tany an-davaka.
Tamin'ny 31 Oktobra Koa dia sady velona sy ny maty rehetra hariva. Izany dia antsoina koa hoe "razana alina," "Anfädernas alina" na "razambeny 'alina".
Ny fivoriana miaraka amin'ny fotsy sy mainty mazia
Raha ny maty, sy ny hery sy ny fanahy, tonga tany hariva io, tsy maintsy, amin'ny lafiny iray, nandrehitra labozia sy nandrehitra afo ho ny tsara izay nataony tamin'ny toerana izy ireo hitsena, hamantatra aminy, hampitonena azy ireo hijery toa azy ireo, sy ny hafa mba hampifangaro fahavalo sy fampitahorana azy ireo hiverina faingana, jereo ratsy kokoa noho izy ireo sy hitandrina ny trano mangatsiatsiaka.
Light, afo, ra, fanehoana an'ohatra ny fahafatesana sy ny haizina dia mifangaro. White sy ny mazia mainty dia nihaona, tamin'ny lelan-ny mainty herin'ny maizina. Druids nampirehetiny nandrehitra afo lehibe mba hampitahorana ny biby mampidi-doza araka izany ratsy izany mpamosavy tonga nanidina. Nasaina ny olona mba hametraka ny ankohonany ny ny afo, ary ny afo fa tsy maka vaovao ny Druids afo mba hiarovan-tena.
Ireo izay tonga avy any amin'ny tontolon'ny fanahy, afaka samy manome fanomezana ho an'ny Taom-baovao, ohatra, ny teny fikasana ny amin'ny fiverenan'ny mazava taorian'ny fahalavoana sy ny ririnina, ary tsara fahavokarana eo amin'ny taona ho avy - na maka ny fanahin 'ireo izay maty io hariva / alina, no hamaly olombelona fanatitra noho ny taom-baovao. Tsy voakasika soa na ozona.
Ity no fototry ny sasany ankehitriny ny olana ny ankizy eo am-baravarana ny alina talohan'ny andro Fetin'ny maty: "Candy na fiara fitateram-bahoaka", "Trick-na-Fifaliana" ( "Spratt na ny fanomezam-pahasoavana"). Samhain rehefa nilaza na dia ny mpanome sy ny mampalahelo mpijinja. Noho izany dia tokony hanaja. Ny Fiangonana Kristianina andro firavoravoana Day Fetin'ny maty, nitsangana mba handresy ny mpanompo sampy fety selta fijinjana.
Ary ny tany am-boalohany Kristianina irlandey fanaony dia ny mangataka ny mofo tao an-trano, ary ho setrin'izany, mivavaka ho an'ny fanahin'ny maty ny havany. Tatỳ aoriana dia nisy fifanjevoana, angamba ny asan'ny maizina valiny "förkristnandet" - na dia mpanompo sampy masina ny Aseraha sy ny fitoerana avo efa nikapa ary nosoloana amin'ny fiangonana Kristianina sy ny fasana - ka "ny velona sy ny maty alina," ny mpanompo sampy eritreritra, dia, misy ny hetsika "Allahelgonaafton", amin'ny teny hafa Halloween.
Ao amin'ny 1840s, indrindra indrindra irlandey nitondra niaraka taminy io fankalazana selta, rehefa nifindra monina tany Amerika. Any Amerika, dia lasa be andro firavoravoana, na dia Kristianina ary no ankalazaina ny 31 Oktobra. Avy any Amerika, dia manana "Americanized" nandritra ny taona maro, dia niverina ho any Eoropa amin'ny lavaka "karandoha" ny voatavo *, mpamosavy-napetraka, mampihoro-koditra saron-tava, scythes, devoly fitrebika sy tombstones amin'ny plastika na hazo.
Misy tahirin-kevitra milaza fa ny orinasa amin'ny vazivazy toy 1991 nanomboka ny fandefasana any Soeda. Ny fanaovana dokambarotra avy amin'ny sakafo rojo Taona vitsy lasa izay dia: "Ary hanangona ny spökkompisar sy ny devoly namany ho tena antoko Halloween sy ho vonona ho alina feno demonia."
Ka izany no izy ireo mamono, renibe, ray, iray tam-po, namana dia mitovy raha niverina tamin'ny maty toy ny matoatoa, ny taolany sy ny demonia! Nahoana no hamboatra azy no tsy dia tahaka antsoina hoe tsara fanahy sy ny "anjely" ao amin'ny asan'ny maizina, raha te-haka tahaka ny havany sy ny namany, izay maty - ary izao indray dia midika hoe mandeha?
Mazava ho azy fa ho an'ny ankamaroan'ny Halloween fankalazana Swedes lalao fotsiny tsy manan-tsiny, tsy nisy nieritreritra fa mety ho zavatra hafa aoriana. Fa nahoana no ny maizina, ary dia mahazo aina tokony Nanasongadina? Moa Fampitahoran'ny tsipelina ny raiki-tampisaka fanahiana?
Mananihany ny olona ho amin'ny fahafatesana, mba hiala andraikitra eo anatrehan'ny maty ny tena? Halloween dia tokony ho hita toy ny ilaina amin'ny zava-misy afa-mandositra? Eny, Halloween dia na inona na inona mihoatra noho ny taloha fanaon'ny mpanompo sampy mba tsy ho manao, kely indrindra amin'ny Kristianina rehetra. Fahafatesana sy ny loza no omem-boninahitra.
Any am-pianarana, ny ankizy mianatra hiala herisetra. Ary miresaka betsaka momba ny fiarovana ny ankizy, Voalohany indrindra momba ny ankizy mieritreritra ny hahasoa. Ny maha olona: ary ny anaran'ny fahafahana natolotra tamin'izany andro izany ireo zanaky ny fahafatesana sy ny marika herisetra any an-tsekoly, ny fampahalalam-baovao sy ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny. Double fitsipika sy ny naivety, lazaiko! Lehibe tokoa ny ilaina ny antoko noho ny eto any Soeda nandritra ny ela sy ny maizina fararano, Halloween dia tsy ohatra tsara!
Mba hanamarihana, toy ny Kristianina, any amin'ny tontolon'ny fanahy sy ny adihevitra ampahibemaso momba mpanompo sampy io zaza-mponina teo hariva. Mamaly Fa raha milalao costumed ankizy ao ny Kristianina iray amim-pahendrena. Lazao, ohatra, tsara fanahy, fa Tsy Ankalazako ny Halloween. Mafy kokoa noho ny mahazatra dia tsy tena ho. Miezaka ny "Kristianina" Halloween, tiako holazaina kosa, dia diso lalana handeha.
* Araka ny irlandey angano, nisy mpanefy vy iray atao hoe Jack ratsy fanahy. Jack namitaka ny devoly, ary nahatonga azy tsy hitaky mampanantena ny fanahiny. Rehefa maty izy tamin'ny farany, dia navela fidirana any an-danitra, satria izy no nahatonga be eto an-tany. Avy eo izy kosa mba mahazo hiafara amin'ny Devoly, dia foana ny fanahy mirenireny eto an-tany. Nangataka ny Devoly, fara fahakeliny, mba hahazo fanala. Devoly La raha kely afo ao amin'ny lavaka turnip Jack nihinana ny. Nanomboka tamin'izay izy manitsaka restlessly manodidina amin'ny "fanala" sy mitady toerana ny hijanona. Ao amin'ny lalao sy ny fombafomba toy izany niantso ny anankiray jiro ho an'ny "Jack-o-fanala", mikendry indrindra mba hampitahorana hiala amin'ny fanahy ratsy.
Vecka 25, fredag 25 juni 2021 kl. 11:33